I-Sun City Cabanas Hhotela
Sun City, eNingizimu Afrika
I-Cabanas Hhotela inikeza indawo yokuhlala yasekhaya engabizi eSun City. Jabulela imidlalo eminingi yamanzi neminye imisebenzi bese uhlala emakamelweni avulekile.
Isevisi enhle eSun City Cabanas Hotel
Izingane ezineminyaka yonke ziyakuthola
Ukuhlala komndeni eSun City
Ihhotela laseCatanas eSun City linikeza abantu izivakashi ezinhle kakhulu, ngokugxila ezidingweni zemindeni ngesikhathi seholide. Lena indawo yokuhlala emndenini e-Sun City enezindawo ezingu-380 ezinethezeka ezifaka amakamelo angu-24 ajwayelekile okubheke echibini, amakamelo amawele angu-120 ajwayelekile, amahhotela angama-21 ajwayelekile abhekene naso ngamakamelo omndeni angu-201 namakamelo okufinyeleleka amathathu. Izivakashi zikwazi ukungena emagqumeni aqhekezayo ngenhla kwe-Waterworld, inikeze ukuhlelwa kwayo kwesigodi saso. Leli libi elibanzi liyindawo yokudlala yasemanzini yezivakashi zonyaka wonke.
I-Sun City Resort iyipharadesi lezingane ngempela. Amachibi aseCabana Hotel ayeklanyelwe izingane engqondweni, enezimbiza ezingenalutho kanye nedamu elidala, elibili elifudumele. I-Kamp Kwena iyipharadesi elizijabulisa lezingane futhi lizogcina izingane zijabule eholidini labo laseSun City.
I-Sun City Cabanas Hotel inikeza izinketho zokudlela ezintathu ezihlanganisa izibhuku ezikhangayo ePalm Terrace. I-Butchers Grill edumile inikeza ama-steaks nama-grills amahle, kuyilapho ukudla okusemini kukhanya kukhishwa kwi-Grande Pool Bar.